Qualcomm inoratidza kuti iyo iPhone 7 inoshandisa Intel modem | IPhone nhau
Musi waMarch 5 tinoburitsa chinyorwa yatakasimudzira pamberi ipapo Intel yaizogadzira chikamu chikuru chemodemu cheiyo iPhone 7. Zvino zvikamu zve Qualcomm Ivo vatanga kudonha mushure mekugadzirwa kwevagadziri uye mamwe marudzi ezvezvinhu akurudzirwa mukuburitswa kwesitatimendi chezvemari chekota kuti icharasikirwa nemirairo yeumwe wevatengi vayo vanokosha uye kuti aya maodha anoitwa nemakwikwi ayo akananga.
Vaongorori vanotenda kuti mutengi uyu achave Apple uye chikonzero runyerekupe rwunoona kuti kambani inomhanya Tim Cook ichavimba neIntel kuti ipe iyo Modem iPhone 7 LTE, chishandiso chatinoyeuka chinofanira kusvika, kana pasina zvinoshamisa, munaGunyana wegore rino. Investor kutya kune musoro, nekuti Apple yakakosha mutengi inounza mabhenefiti mazhinji kune vayanopa.
Qualcomm icharasikirwa neApple semutengi; Intel ichagadzira iyo iPhone 7 LTE modem
Qualcomm CEO Steve Mollenkopf akaudza vaongorori kuti ari "kufungidzira" kuti mutengi mukuru achaodha kubva kumukwikwidzi, zvichiratidza kurasikirwa kwebhizimusi kukambani. […] Samsung yatove nevashambadzi vazhinji, izvo zvinosiya Apple seye chete mukwikwidzi.
Chirevo chekutanga chakauya kubva kuna CLSA Securities muongorori Srini Pajjuri uye ndokuti Intel yaizochengeta 30-40% yemirairo. Sekureva kwemuongorori, Apple ichaenderera ichitsamira paQualcomm kune mamwe maodha, asi ivo havazowanda kusvika zvino. Zvinonzwisisika kana tichifunga kuti iyo Cupertino kambani haifarire kuvimba nekambani imwe chete.
Intel inonzi ine vashandi vanopfuura chiuru vanoshanda pamodemu yeLTE 1.000. Modem nyowani iyi ichakwanisa kurodha pasi nekumhanya inosvika ku450Mbps y upload nekumhanya kunosvika 100Mbps, iyo yaizodarika 300 / 150Mbps yeiyo iPhone 6s uye iPhone 6s Plus. Izvo zvisiri pachena kwandiri pane iyi nyaya ndosaka vachizobvunza Qualcomm kana vasingakwanise kukwikwidza neIntel mune izvi. Semazuva ese, kusahadzika kunonyangarika nekufamba kwemwedzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Qualcomm inopa Apple uye inoratidza kuti iyo iPhone 7 inoshandisa Intel modem
Facebook Messenger inogadziridza ichibvumira mapoka eboka